Asan’ny mpitondra nifanesy Ny fiadanam-bahoaka no aoka hifampitsarana
SEG eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny atitany Tsy mahafaly ny zandary
Mafana ny adihevitra any anatin’ny zandarimariam-pirenena momba ny firafitry ny governemanta vaovao raha ny feo re.
Rivo Rakotovao Nitokana ny toby miaramila RFI Ivato
Manoloana ny famindram-pahefana anio eo amin`ny filoham-pirenena teo aloha, Hery Rajaonarimampianina sy ny filoha vaovao, Andry Rajoelina, nilaza ny filoham-panjakana, Rivo Rakotovao fa tsy tombontsoa ambonin`ny firenena ny fambolena korontana.
Fikajiana ny tontolo iainana eto Madagasikara Tena mila ezaka goavana
“Mitentina 70 tapitrisa dolara no azon’i Madagasikara tao anatin`ny tetikasa “credit carbone” tamin`ny taon-dasa”, hoy ny minisitry ny tontolo iainana, ny ekolojia ary ny ala, Randriatefiarison Guillaume
Sambo nirehitra Mpiasa iray maty…
Vokatry ny tsy fitandremana noho ny baikon’ny mpiampiasa azy ireo dia nipoaka sy nirehitra ny sambo “Nosy Mangabe” izay miantsona miandry entana ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina ny alarobia 16 janoary teo tokony ho tamin’ny 11ora atoandro.
Lycée Jacques Rabemananjara ao Toamasina Hanamparan'ilay karana mpanefoefo ny maha izy azy
Mbola manakoako sy mitohy hatrany ankehitriny ny fanjakazakana sy fanaparam-pahefana ataon'ilay teratany karana malaza ho mpanefoefo ao Toamasina ao.
Tsy azo lavina fa samy nanangana fotodrafitrasa avokoa ny fitondranana nifandimby teto. Manomboka tanisaina sy hireharehana any anaty fampielazan-kevitra izany. Tsy izay anefa no hitarafana ny fampandrosoana fa ny fivoaran’ny fiainan’ny Malagasy no maridrefy lehibe indrindra hamantarana na nandroso na nihemotra ny firenena.
Tsy tokony hiedinedina rehefa nahavita nanangana fotodrafitrasa kanefa ny mpiara-monina sy ny vahoaka miha mahantra, fa ny mpitondra miha manankarena, ary manjaka ny kolikoly samihafa nanomboka tamin’ny tetezamita hatramin’izao. Niezaka mametraka zavatra mba hahatsiarovana ny anarany mba hanakonana sy hamafana ireo afera maloto samihafa mampalaza azy. Raha hanao fampitahana fotsiny isika ny fari-piainan’ny Malagasy teo anelanelan’ny 2002-2008 mitaha ny 2009-2018 dia tsy misy afaka handa fa niaina kokoa ny vahoaka talohan’ny fanonganam-panjakana ny 2009. Nandry fahalemana kokoa ny vahoaka, ary voahaja kokoa ny tany tan-dalàna. Voafehy kokoa ny resaka fanondranana harem-pirenena, ary tsy dia nahenoana kolikoly ka natokisan’ny mpamatsy vola i Marc Ravalomanana tamin’izany. Efa mpandraharaha malaza sy mpanefoefo i Marc Ravalomanana tany amin’ny taona 80-90 nampalaza ny orinasany dia ny Tiko, ary io mbola voaporofo io ankehitriny hoe na nodorana aza ny fananany, dia mbola tafarina izy. Tsy fanenjehana be fahatany fa mba nanao ahoana ny haren’ny filohan’ny tetezamita Andry Rajoelina talohan’ny tetezamita ary tamin’ny fomba ahoana no nahafahany nanana ireo hareny tsy hita pesimpesenina ary avy aiza ny vola afafiny amin’izao firotsahan-kofidiana izao ?